Kedu nke a na-ejikarị maka ụlọ ahịa ọgwụ na ụlọ ọrụ nri, ihe niile bụ nri nri ma gafere FDA, EU 、 LFGB asambodo, na ngwaahịa anyị bụ ndị ama ama na Australia, Brazil, Canada, United States, India, Newland, Mexico, Philippine wdg .
PK eme ihe na Septemba
E nwere otu abụọ maka ịlụ ọgụ maka asọmpi ahụ. Ha bụ agu / otu na wolf team. Ndị niile sonyere nọ na-anwa ike ha niile iji nweta nsọpụrụ maka otu. Site na asọmpi a, Onye ọ bụla na-eto, na anyị niile miri emi nghọta na mmụọ ọrụ otu, Onye ọ bụla nọ na ụlọ ọrụ fukang ga-anọgide na-alụ ọgụ maka ndụ ka mma.